5 keys to food safet - Engelska - Burmesiska Översättning och exempel
You searched for:5keys to food safety clean (Engelska - Burmesiska)
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုကိုအာရုံစိုက်ခြင်း၏ အဓိကအချက်မှာ လူများတွင် အမြင့်မားဆုံးသောဖြစ်စဉ်များကို ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် ခပ်ခွာခွာနေခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို စိတ်အေးလက်အေးလုပ်နေသောကြောင့် ဖြစ်စဉ်အသစ်များတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တိုးပွားလာမှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲမြင့်တက်လာမှုများအတွက် ဒေတာများကို စုစည်းကာ နမူနာပုံစံလုပ်ခြင်းဖြင့် အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေခြင်းတို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
washing with plain soap results in more than triple the rate of bacterial infectious disease transmitted to food as compared to washing with antibacterial soap.comparing hand-rubbing with alcohol-based solution with hand washing with antibacterial soap foramedian time of 30 seconds each showed that the alcohol hand-rubbing reduced bacterial contamination 26% more than the antibacterial soap.
ဘက်တီးရီးယားဆန့်ကျင်သော ဆပ်ပြာနှင့် ဆေးခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရိုးရိုးဆပ်ပြာနှင့် ဆေးခြင်းသည် အစားအစာများသို့ ဘက်တီးရီးယား ကူးစက်ရောဂါ ကူးစက်မှု နှုန်း သုံးဆ ပိုမို မြင့်မားသည်။ လက်ကို အယ်ကိုဟော အခြေပြုအရည်များဖြင့် ပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့် ဘက်တီးရီးယား ဆန့်ကျင်သော ဆပ်ပြာဖြင့် အလယ်အလတ် အချိန် စက္ကန့် 30 ဆေးကြောခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘက်တီးရီးယား ဆန့်ကျင်သော ဆပ်ပြာနှင့် ဆေးခြင်းထက် အယ်ကိုဟောအရည်နှင့် လက်ပွတ်တိုက်ခြင်းက ဘက်တီးရီးယား ပါဝင်မှုကို 26% ပိုမို လျော့နည်းစေသည်။
dragon shield (Engelska>Latin)vc ker conveÃ§ar um pouco (Spanska>Engelska)she can dance very well (Engelska>Hindi)устрашать (Ryska>Franska)فیلم سکس دختر روسی جوان (Tyska>Engelska)terebinter (Norska>Engelska)좋은 밤 아기 (Koreanska>Engelska)sinoniem vir ongehoorsaam (Afrikaans>Engelska)devi dare la possibilità di comprare online (Italienska>Engelska)chica (Spanska>Portugisiska)einwandfreier (Tyska>Danska)tapes (Franska>Engelska)nacházíme (Tjeckiska>Tyska)bu representation within sbu cmt (Engelska>Polska)the phone line is open from 10am 4pm, cet (Engelska>Slovakiska)besan meaning in kannada (Engelska>Afrikaans)lunastan (Finska>Svenska)चेहरे पर निशान (Hindi>Engelska)吹口哨 (Kinesiska (förenklad)>Lettiska)szerkesztőprogramot (Ungerska>Engelska)ta qifsha nonen (Albanska>Engelska)sähköntuotantolaitteiden (Finska>Lettiska)sodium bisulfite (Engelska>Spanska)es t'il possible de m'offir les frais de port? (Franska>Engelska)دانلود فیلم سوپر خارجی سکس (Walesiska>Engelska)